Ulwakhiwo kunye neMisebenzi ye-Endoplasmic Reticulum
I-endoplasmic reticulum (ER) iyilungu ebalulekileyo kwiiseli ze- eukaryotic . Idlala indima enkulu kwimveliso, ekusebenziseni, nasekuthuthweni kweeprotheni kunye neep lipids . I-ER ikhiqiza iiprotheyini ze-proteins kunye neep lipids kwi-membrane yayo kunye nezinye izinto ezincinci ezibandakanya i- lysosomes , i-vesicles eyimfihlo, i- Golgi appatatus , i- membrane yeselfowuni kunye nezityalo zeseli zityalo .
I-endoplasmic reticulum yinkonzo yamathambo kunye nezikhwama ezicwangcisiweyo ezikhonza imisebenzi eyahlukahlukeneyo kwiiseli zezityalo kunye nezilwanyana . Kukho imimandla emibini ye-ER eyahlukileyo kwisakhiwo kunye nomsebenzi. Omnye ummandla ubizwa ngokuba yi-ER erough ngoba i- ribosomes iqhotyoshelwe kwicala le-cytoplasmic. Omnye ummandla ubizwa ngokuba ngu-ER ngokugqithiseleyo ngenxa yokuba ayikho i-ribosomes eqhotyoshelweyo. Ngokuqhelekileyo, i-ER ephosakeleyo iyinethiwekhi yethubhu kunye ne-ER iyinkqutyana yeembotyi ezicwecwe. Indawo ngaphakathi kwe-ER ibizwa ngokuba yi-lumen. I-ER inkulu kakhulu isuka kwi- membrane yeseli ngokusebenzisa i- cytoplasm kunye nokwenza uxhulumano oluqhubekayo nevulophu yenukliya . Ekubeni i-ER idibene nevulophu yenukliya, i-lumen ye-ER kunye nesithuba ngaphakathi kwimbulunga ye-nyukliya inxalenye yecandelo elinye.
I-endoplasmic reticulum enobuhlungu yenza iimbumba kunye neeprotheni ze- secretory. I- ribosomes ehambelana ne-ER er synthesize proteins yenkqubo yokuguqulela . Kwii- leukocytes ezithile ( iiselgi zegazi ezimhlophe), i-ER engqungquthela ikhiqiza i- antibodies . Kwiiseli ze-pancreatic , i-ER engqungquthela ivelisa i-insulin. I-ER enobudaka kwaye iphosa ngokuqhelekileyo ixhomekeke kunye kunye neeprotheni ezenziwe yi-ER engena kwi-ER ephosakeleyo ukuze idluliselwe kwezinye iindawo. Ezinye iiprotheni zithunyelwa kwisixhobo seGolgi ngezithuthi ezikhethekileyo zokuthutha. Emva kokuba iiprotheni ziguqulelwe kwiGolgi, zithunyelwa kwindawo yazo ezifanelekileyo ngaphakathi kweseli okanye zithunyelwa kwiseli ngo- exocytosis .
I-ER ehamba phambili inezinto ezininzi ezahlukeneyo kuquka i- carbohydrates kunye ne- lipid synthesis. Lipids ezifana ne- phospholipids kunye ne-cholesterol ziyimfuneko yokwakhiwa kweembrane zeseli . I-Smooth ER nayo isebenza njengendawo yenguqu ye-vesicles ezithutha iimveliso ze-ER kwiindawo ezahlukahlukeneyo. Kwiiseli zesibindi i-ER ephosakeleyo ivelisa i-enzymes eyanceda ukukhupha izakhi ezithile. Kwiimisipha i-ER ehamba phambili isekela ekuqhekekeni kwamaseli e-muscle, kwaye kwiiseli zengqondo zenza amahomoni angamadoda namabhinqa.
I-endoplasmic reticulum yinkalo enye yeeseli . Ezi zakhiwo zeseli ezilandelayo zifumaneka nakwizicwangciso zesilwanyana se-eukaryotic:
Ii-Centrioles - ii-cylindrical groupings ze- microtubules ezitholakala kwiiseli zezilwanyana kodwa zingatshali izisele . Baya kunceda ukuhlela iintambo zombini ngexesha lokwahlula iseli .
Ama-Chromosomes - izinto eziphathekayo zofuzo eziqukethe i- DNA kwaye zenziwe kwi- chromatin enomlilo .
I-Cilia ne-Flagella-i- protrusions ukusuka kwiseli eyanceda ekuhambeni nasekuhambeni kwamaselula.
I-membrane yeselula - isalathisi esincinci, esincinci esingenakunyamelekayo ejikeleze i- cytoplasm kwaye ifake i-contents yeseli. Ikhusela ingqibelelo yengaphakathi yeseli.
I-Cytoskeleton - inethiwekhi yee-fibers kulo lonke i-cytoplasm encedisa ukusekela iseli kunye neenkxaso kwi-organelle movement.
I-Golgi Complex - yenziwe ngamacandelo eembotyi ezicatshulwayo ezibizwa ngokuba yi-cisternae, i-Golgi ivelisa, iinkqubo, ivenkile, kunye nemikhumbi yamaselula.
I-Lysosomes - iimbumba ze-enzymes ezigaya ama-macromolecules eselula.
I-Mitochondria - i-organelles enika amandla kwiseli ngokuqhuba ukuphefumula kwamaselula .
I-nucleus - izindlu ze-chromosomes kwaye ilawula ukukhula kweseli kunye nokuvelisa.
I-Peroxisomes - izakhiwo ezincinci ezikhupha utywala kunye nokusebenzisa i-oksijeni ukuphula amafutha.
I-Ribosomes - i-organelles ejongene nokuhlanganiswa kweprotheni kunye nemveliso ngokuguqulela .
UMaggie Lena Walker: UMongameli weBhanki lokuqala